November 17, 2020 by aminawehelie
17th November, 2020 (Talaado)-AminaWehelie.com- Xooghayaha Caafimaadka ee Biritan, ayaa tibaaxay, in la sii dheereyn karo waqtiga gobolka England uu ku jirayo xayiraadda, looga gol leeyahay in lagu dhimo, faafista xanuunka Coronavirus.
Iminka ayaa waxaa saaran gobolka England ee wadanka UK, xayiraad ku eg 2-da Disember, hase yeeshee Matt Hancock oo soo hadal qaaday xalayto, in ay noqoneyso wax lagu degdegay haddii hadda la sii saadaaliyo xilliga xayiraadu si rasmi ah u soo af-jarmeyso.
Mr Hancock ayaa sheegay, in ay dhici karto in waqti lagu sii daro, oo la dhaafiyo ilaa iyo xilliga ciidda masiixiga.
Coronavirus ayaa weli ku sii faafaya dunida, gaar ahaan dalkan UK, taasoo maalin kasta uu xanuunku soo ridanayo dad kor leh, dhimashaduna sii kordheeyso.
Sources: Ilo kala duwan.
Previous Qarax ka dhacay Muqdisho
Next Gabadha yar ee ka qoslisada ah ee reer Nigeria Emmanuella oo guri u dhistay hooyadeed